Cheap Flights to Aqaba, (AQJ) Airline Tickets
Sample Aqaba Airfare Deals
Aqaba Flights Information
Facts About Flying to Aqaba, Jordan
73% of Aqaba travelers were over the age of 35.
13% of Aqaba travelers were over the age of 60.
27% of Aqaba travelers were millennials.
47% of Aqaba travelers were female.
Travelers spent an average of 25 days in Aqaba.
April, September was the month with most bookings for Aqaba.
February was month with the least bookings for Aqaba.